अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको भिडियो कसरी पुग्यो ‘पोर्न हब’मा ? | Rajmarga
कहिलेकाहीँ एउटै कामले अति सुख पनि दिलाउँछ र निकै दुःख पनि । अहिले प्रियंका कार्कीको जीवनमा यस्तै भएको छ । ‘कथा काठमाडौं’ कै सेटमा प्रियंकाले हुनेवाला पति आयुष्मान जोशीलाई भेटिन्। यही फिल्मको सेटमा प्रेम टुसायो, झाँगियो, हराभरा भयो र केही समयअघि इन्गेजमेन्ट गरेर सफलताको उचाइमा पुर्याए ।
Previous post: पहिरोले छोप्यो होमवर्क गर्न साथीको घर गएका बालकलाई !
Next post: रोकिएन ट्रिपर आतंक, राजधानीमा भएको दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते